Chii Masteron Propionate (Drostanolone Propionate)?
Masteron Propionate (521-12-0) uye Masteron Enanthate (472-61-1) zvisiyana zve Masteron nechechi duku. Izvo zvose zvinokonzerwa uye zvinowanzove pakati pevarimi vemiti. Mhedzisiro huru pakati pematau maviri ndiwo maitiro ekutungamirira uye hafu yeupenyu. Masteron Propionate dhijhini haisi duku asi inopiwa zuva rimwe nerimwe kubva apo mushonga unoshanda nekukurumidza uye unogadzirisa muviri munguva pfupi. Chidimbu cheMercon Enanthate, kune rumwe rutivi, chinopiwa kamwe chete kana kaviri pavhiki asi mune zvakawanda zvakakura sezvo zvichishanda zvishoma asi zvinoita kuti muviri uve nekukurumidza.
Masteron propionate powder kana mishonga inowanikwa nyore nyore mumusika, Kusiyana na Masteron enanthate uyo anowanikwa asingatarisiri. Kazhinji, kufanana pakati peviri steroid kune zvinopfuura kusiyana. Nhamba shoma shomanana inogona kuunganidzwa Masteron enanthate vs propionate.
sei anoita Masteron Propionate inoshanda?
Masteron propionate (521-12-0), inozivikanwawo se drostanolone propionate ndiyo yepakutanga Masterone saka achiienzanisa na Masteron enanthate, inobata maererano nekududzirwa. Vazhinji vashandisi veSteroid vanoziva Masteron sezita re Masteron propionate.
Masteron propionate imwe yevana vashoma vanabolic steroid yakazivikanwa zvikuru uye yakagadzirwa kwekutanga ku1959. Pamwe pamwe nevamwe vanabolic steroids vakaita Superdrol uye Anadrol, Masteron propionate yakagadzirwa nekemikari laboratory inonzi Syntex.
Kuti kuderedza mari yekutsvakurudza, Syntex yakashanda nedzimwe ma laboratori ine chibvumirano chekutengesa mitsva yekutsvakurudza nekuwana kwekutsvakurudza pamwe nesangano revamwe. Lily laboratories aiva nemukana wekutengesa chidimbu ichi kushandisa Drolban sezita iri muUnited States. Syntex, kune rumwe rutivi, inogona kusvika kune misika yose pasi peChriston brand brand.
Munguva pfupi pfupi, Masteron propionate yakave yakakurumbira muPortugal, Belgium, Germany, United Kingdom, Japan, neSpain. Yakawanawo mukurumbira muUnited States. Mune 1960's, The Food and Drug Administration muUnited States yakabvumira kushandiswa kweSteroid nekuda kwezvokurapa mushure mokunge mukurumbira wayo wakakura zvikuru.
Vakadzi vanoshanda nekenza yepamusoro yepabonde ndivo ndivo vakatanga kushandisa Masteron mukana wokurapa. vazhinji vevakadzi vakashandisa mishonga iyi vaiva postmenopausal. Kubudirira kwemishonga muUnited States kwakaita kuti zvizivikanwe munyika yose. Kusiyana ne testosterone dosage, iyo yakashandiswa kare, virilization haisi pfupi pakushandisa muedzo wakaenzana wa Masteron. Vachirwere vechikadzi uye chiremba vakaudzwa pamusoro pemusiyano saka vakasarudza kushandisa Masteron.
Vakadzi vaitakura muyero we300mg kana kupfuura kwevhiki vakawana mamwe matambudziko akadai sekugadzirisa clitoris, kukura kwebvudzi paziso, izwi rakadzika uye acne. Kuti varwe nemigumisiro iyi, varwere vakaderedza muyero asi vachiri kunakidzwa nezvizhinji zvakakosha Masteron aigona kupa.
Bodybuilders nevatambi havana kusiyiwa shure, zvakanyanya mu 1980s. Vakashandisa zvinhu zvose zvakanakisisa Masteron propionate aigona kupa kubudisa mishonga yakaonda. Zvisinei, mushure mekunge vateereri vazhinji vakatanga kuishandisa mukunakidza, hurumende yeUnited States yakaderedza kushandiswa kwayo. nhamba yakawanda yevarimi ve Masteron vanorega kugadzira uye kutengesa nokuzvidira. Kusvikira kumagumo e1980s, kubudiswa kwechirwere ichi kwakaderera zvikuru. Maira laboratori chete anoramba achibudisa steroid kumadokero kwenyika aive muBelgium. Kugadzirwa kwaMateon kwakabatwa zvachose mumakore ekupedzisira '90s mushure mokunge mabharabhu akasara akavharwa.
Kunyangwe pane iye zvino hapana mutemo unodzivisa kugadzirwa uye kutengeswa kwa Masteron nekuda kwezvokurapa muUnited States, vanachimishonga havakwanisi kutangazve kugadzirwa kwayo chero nguva pfupi. Pamwe nemhaka yemakemikari ayo.
Masteron propionate inongova DHT chete iyo yakashandurwa zvishoma. Rimwe boka re methyl rinowanikwa kuCarbon 2 Position munzvimbo yakagadzirwa DHT. Kuchinja uku kuduku kunowedzera simba revanaolic raMasteron kuburikidza nekuvandudza kushandiswa kwemasabolism kusagadzikana. Apo inoshandiswa, Masteron anabolic zvinhu zvinotora nguva yakareba kuti zvigadziriswe saka zvichiwedzera steroid hafu yeupenyu. Rapid metabolism kunyanya mumapfupa emasumbu mutsvina saka hazvidzivirirwa. The Ultimate Guide to Methyltestosterone for Bodybuilding
Onto a 17beta hydroxyl boka, carboxylic acid ester inowedzerwa kushandura steroid. Steroid yakasimbiswa ine polarity shoma saka inowanikwa zvishoma nezvishoma mumuviri kana ichienzaniswa nesteroid. Nokudaro kushandurwa kunokurisawo hafu yehupenyu hwa Masteron propionate. Saka esters saka vane nguva yakakwana yekuzvidzivirira kubva kumadziro e Masteron kuvabvumira kufamba nekusununguka kumativi ose mumuviri. Vashandi havazodi kuti vashandise Masteron propionate kakawanda sepakutanga sezvo chiyero chinogona kugara kwemazuva maviri mumuviri.
Masteron propionate dosage yevarume vakuru vese vari kusvika 300mg kusvika 400mg vhiki nevhiki. Zvakananga, chirongwa che 100mg chinofanira kupiwa zuva nezuva kwemazuva matanhatu, manomwe kana masere. Vakadzi vanofanira kushandisa zvishomanana zvechirwere ichi kuti vadzivise virilization; anenge 50mg. Vakadzi vanoshandisa 100mg kana zvizhinji pavhiki vanowanzoona virilization.
Izvi zvinodhaka hazviiti kukonzera kuwedzera mumusasa mashoma. Nokuda kwechikonzero ichi, vashandisi vazhinji vanofunga kuti iyo haina simba steroid. Vamwe vatambi vanobata mushonga zvisina kunaka saka havafariri maitiro ayo. Uine hutano hune muviri hunopfuura makumi maviri nemashanu kubva muzana, haugoni kuona chero hupenyu hunochinja shure kwekushandisa steroid iyi. Muchidimbu, vashandisi vanofanira kurasikirwa nemafuta emuviri vasati vatonga dhigiriji.
Masteron propionate maitiro
Masteron cycle yekutanga
Kune vanotanga, ruzivo runofanirwa kunge rwunenge mavhiki e12 ane maestre evhiki nevhiki e300mg kusvika 500mg ye testosterone enanthate uye 400mg ya Masteron enanthate. Muchidimbu ichi, kusiyana kweananthati ye Masteron kunoshandiswa sezvo inoshanda zvakanaka ne testosterone enanthate. Uyezve, paunenge uchishandisa Masteron kunyorera, majekiseni mashomanana anowanikwa. Vashandi vanogona kusarudza testosterone yavo yakasarudzwa kubva kune rumwe rutivi rwe300mg kusvika 500mg. Chisarudzo chinogona kunge chakavakirwa pane zvakaitika kwavari ne testosterone kana kuti zvikomborero zvavanoda kuwana kubva kumakiti pacharo. Chinangwa chikuru chekugadzirira uku ndechokutaura Masteron kune hurongwa nemigumisiro yayo. Masteron inogadzira zvinogadzirisa zvinokonzera saka hapana chikonzero chekutaura imwe aromatase inhibitor kuti inopesana nemagetsi anonzi testosterone. Zvisinei, zvinofanira kunge zvakajeka kuti Masteron haaratidzi zvakasimba aromatase inhibitor zvinokonzerwa nekuenzaniswa nevamwe inhibitor zvakadai se Letrozole, Aromasin, uye Arimidex. Kana pakave ine mishonga yakawanda inogadzirisa, ipapo musikana anofanira kufunga nezvekuisa imwe simba inhibitor mumutero. Gynecomastia yave yakajairika pakati pevashandi vanodzika Masteron nemafuta aromatizing seTesttosterone uye Dianabol.
Pakati pe Masteron propionate cycle
Uyu ndiwo mavhiki e10. Izvo zvinotarisirwa zvinosanganisira 100mg testosterone propionate vhiki nevhiki (kana 25mg pazuva) uye 400mg Masteron propionate kwevhiki (inogona kupiwa mumitambo ye 100mg zuva nezuva). Svondo rimwe kusvika vhiki masere, mutenzi anofanirawo kutora 50mg kusvika 70 mg kubva kuAnavar zuva nezuva.
Pakati pepakati inenge yakagadzirirwa kucheka nekuomesa muviri uye panguva imwe chete yekurasikirwa kwemafuta kana kuwedzera kuwanda kwemazana. Izvi zvinofanira kutevera pfuma shoma shoma uye kusina mvura yekuchengetedza chero bedzi mushumiri ari pasi pekudya kunokonzera kuzadzika kwezvinangwa izvi. Testosterone inowanikwa muhomwe kuti ivimbise kuti zviyero zvinoda zve testosterone zvinoda muhurongwa zvinowanikwa kubva pakugadzirwa kwe testosterone yemuviri kunopedzwa nekushandiswa kwevanabolic steroid. Nokuda kwechikonzero ichi, mushandisi anofanira kupfuurira kuburikidza neTesttosterone Replacement Therapy ne dose yemamiriyoni zana pavhiki. Muchiitiko ichi, zvakakodzera uye zvakajairika zvinokonzerwa ne testosterone hazvibatsiri. Nechitsika che testosterone, mikana yekugadzirwa kwemafuta ishoma saka hapana chidimbu chekusanganisira aromatase inhibitor mumutsetse. Masteron aromatase inhibiting mano anokwana mumutambo uyu. Anavar uye Masteron ndivo mapurisa makuru ayo achabatsira mukuwana kuwanda kwemaonda uye kurasikirwa kwemafuta pasina kuchengetwa kwemvura kana kuwana pfuma.
Nguva yekufamba kwenguva masvondo e10 ane muyero we400mg Masteron propionate kwevhiki, 100mg testosterone propionate kwevhiki uye 400mg trenbolone pavhiki. Izvi zvakasimba uye zvakagadzirirwa vadzidzisi vane ruzivo uye vane unyanzvi. Inomesa mwoyo muviri panguva yekucheka kana paunenge uchigadzirira mhangemutange. Mushandisiwo anowanawo anabolic simba yezvakazara-zvakawanda uye zvakakosha kuwedzera kwekuwedzera. Chero bedzi mushumiri ari pasi pezvokudya zvinotarisirwa kuzadzisa zvinangwa zvakafanana uye kudzidzisa zvakaoma, kusanganiswa kwetabolone, Masteron, uye testosterone kuchapa kuoneka kuchinje pane muviri. Kunze kwekuva nesimba kwazvo, Trenbolone haina kutendeukira kuEstrogen. Kuzvibatanidza na Masteron, chero munhu anoshandisa zviri nyore kuti awane muviri wokukwikwidzana nekubatsira kwekudya kwakanaka uye kudzidziswa zvakakwana.
mushandisi chinguva Dosage Migumisiro
Kutanga 6 mavhiki 50mg-100mg Masteron propionate zuva nezuva
30mg-40mg methandrostenolone zuva nezuva
· Kuvandudza kushanda kwesimba.
· Minimum weight gain
Mutambi wechimumire 6-8 mavhiki 100mg Masteron propionate
40mg Turinabol zuva nezuva
100mg testosterone propionate zuva nezuva · Kuwedzeredza zviratidzo zvemasimba
· Kushuva musimba mashoma
Vane ruzivo uye vanyanzvi vemitambo 10 mavhiki Vhiki dze1-8; 300mg Masteron propionate vhiki nevhiki ne500mg testosterone enanthate vhiki nevhiki
9-10 vhiki; 50mg Masteron zuva nezuva pamwe 100mg Testosterone propionate zuva nezuva · Kuderedza muviri mafuta akawanda
· Kusava nemisungo
Solo Masteron propionate dhesi isina simba uye haipei mhinduro inoda.Kunowedzera simba rayo, zvinokurudzirwa kuisunganidza pamwe nedzimwewo androgenic uye anabolic steroid; Oxandrolone uye Winstrol isarudzo yakanaka. Kuwedzera muyero wehuwandu hazvireve kuti zvinowanikwa zviri nani zvicharatidza pane zvimwe zvinosvibisa migumisiro zvichaonekwa. Kuvaka mishonga yakaonda, chikwata cha Masteron propionate uye testosterone chinoshanda. Uyewo, unogona kusanganisa steroid ne Trenbolone uye boldenone. Vatambi uye mizimba inoshingairira kuvaka simba pane kuvaka masumbu munguva yekucheka maitiro inobatsira zvikuru kubva pane zvose Masteron propionate inopa.
Masteron propionate nemigumisiro nemigumisiro
Sezvambotaurwa, Masteron propionate zvinoshandiswa zviri nani kuratidzwa panguva yekucheka maitiro. Uyewo, vashandi vanofanira kunge vane hutsika hwakanyanya huwandu hwemafuta. Ichi ndicho chikonzero chikuru nei chiyero ichi chinotarisirwa kusvika kumugumo wekugadzirisa masangano ekugadzirisa muchero; panguva ino, vanhu vazhinji vachave varasikirwa nemafuta akawanda. Masteron propionate achabvisa mafuta akasara akaoma pamagumo emhepo. Antiestrogenic migumisiro ye Masteron propionate inoita kuti muviri uite seomeswa zvakakwana uye huwandu hunochinja. Migumisiro haichazove yakanyanya-inotumidzwa kune vanhu vane zvinopfuura 10% mafuta emuviri. Nenzira yakanaka, avo vanonamatira zvakakwana havanganyadziswi, vachaona seoma uye zvakaoma kutarisa. Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Purogiramu, Zvigumisiro, Zvipo, Nhamba
Masteron propionate inenge isisina simba nokuda kwekukwikwidza. Like Primobolan Depot, Masteron inogona kubatsira mutengi kuwana mamwe mashoma, zvisinei nokuti haasi yakawanda kana kuwedzerwa kuyerwa kwaiitwa. Zvisinei, chizvarwa uye chinoonekwa kuwanda kwevanhu zvinenge zvisingabviri nemamwe marudzi e-steroid zvakakodzerwa zvakakosha zvekunyengedza. Vamwe vanogadzira muviri vanogona kusarudza kuisa steroid iyi mukuronga kwavo kwehupfumi hwemafuta uye anti-estrogenic. Kana nguva isati yasvika, steroid inoita kuti muviri usachengetedze mafuta akawanda, asi haifaniri kunge iine chikonzero chega chekushandisa muchikamu chacho. Pane kudaro, kutora mafuta emuviri kunofanira kuitika pasina rubatsiro rwechirwere. Kunze kwekufamba kwemwaka kunoratidzwa nehupamhi hwehutachiona hunokonzerwa ne testosterone doses. Kuwedzerwa kweTrenbolone kana kuti Nandrolone zvinokonzera kuwedzera kuwedzera kweprogesterone. Saizvozvowo, Dianabol kana Anadrol vachakurumidzawo kuita mabasa esrogenic. Zvinosuruvarisa, nemishonga inorwisa-estrogenic, Masteron haikwanise kurwisana nematunhu akareba eestrogenic.
Masteron propionate madhara
Kuenzaniswa nedzimwe vana anabolic steroids, Masteron propionate madhara haana kuipa uye anogona kutaridzika nyore nyore. Vazhinji vashandisi, kunyanya varume vari nyore kuvatsungirira. nokuda kwevakadzi, zviratidzo zve virilization zvinogona kuva zvinetso asi nehuwandu hwematokisi, dzinogona kudzorwa. Kukurukurwa pasi apa kune madzitiro eWonon propionate.
Uyerogenic nemigumisiro yakazara zvikuru pakati pevashandi vaMonon propionate. Inosanganisira kuwedzera kwebvudzi kukwegura, acne uye nekukurumidza kusuruvara kwevhudzi kwevarume vakagadzirirwa kuva nemhazha. Nenzira yakanaka, pasinei nokuti iine DHT yakagadzirwa maitiro ayo e androgenic inonyoresa. Izvo zvikamu zvechikamu ichi, asi, zvinonyanya kuvimba nevanhu. Semuenzaniso, Masteron anokurudzira mhanje pane varume vakangwara kupfuura mamwe anabolic steroid yakafanana.
A 5-alpha-reductase enzyme, an enzyme iyo inoshandura testosterone ku dihydrotestosterone, haikwanise kugadzirisa maitiro eHonon propionate hormone. Ichi ndechokuti Masteron ishanduko DHT isinganzwisisi saka iko kunoderedza kushandiswa. Zviri pachena, pasina kuderedzwa, metabolism haiti, naizvozvo, hapana chakavharirwa. 5-alpha-reductase inhibitor yakafanana neFinsteride ichave isina kumira pa Masteron.
Zvinhu zve androgenic zve Masteron zvinoita kuti virilization muvakadzi. Zviratidzo zvinosanganisira kuwedzera izwi, kuwedzera kwe clitoris, kukurumidza kubvisa bvudzi. Iyi migumisiro yemigumisiro yakave iri pakati pevarwere vekenza yemazamu avo vanoshandisa maitiro akadai a Masteron. Zvinonyanya kuitika kuti udzivise zviratidzo izvi kana uchishandisa maitiro mashoma asi anoshanda. Masteron propionate ifupi shoma ester saka yakanatswa kubva mumuviri nokukurumidza kudarika nguva yakareba Masteron enanthate. Mukadzi anofarira kushandisa Masteron akasiyana naizvozvo anokurudzirwa kushandisa Masteron propionate. Kana zviratidzo zvinokurumidza kukurumidza, mushandisi anofanira kumira dhiyo pakarepo, mushure mezvo ivo vanotarisirwa kupera nokukurumidza. Kana isina kuchengetwa, vangave vasina kukwanisika.
Estrogenic nemigumisiro haina kuratidza paunoshandisa Masteron. izvi zvakakonzerwa nekuti Masteron haaine chero progestin zvinhu hazvibvumi. Muchiitiko ichi, kuchengetwa nemvura uye gynecomastia hazvizove dambudziko zvachose. Vashandi havazovi neHurumende yepamusoro yeropa yakaunzwa nekusakosha kwekuchengetedza mvura. Nayo pachayo, Masteron angaratidza kupesana-estrogenic zvinokonzerwa naizvozvo anti-estrogen haifaniri. Zvisinei, inogona kudiwa uye saka inosanganiswa mumatanda akasiyana.
Masteron inokonzera cholesterol mazinga haigoni kuregererwa. LDL cholesterol inowedzera, nepo HDL yeholesterol inowedzera. Iko kushandura kwekushutoriol haisi inotyisa paunoshandisa Masteron uchienzanisa nekushandisa dzimwe steroid seC17-alpha alkylated. Asi iyo yakanyanya kusimba kana ichienzaniswa ne testosterone hormone uye Nandrolone michina. Kune imwe nzvimbo, Masteron inogona kunge isina kunyanya kukonzera kuwedzerwa kweropa, iyo vanhu vakawanda vangaisaremekedza.
Kutarirwa kweCholesterol kunofanirwa kunyatsotaridzirwa paunoshandisa Masteron propionate kudzivisa cholesterol yakagadzikana nemigumisiro. Kana wakambove nechinetso chekutarisira cholesterol mumuviri wako kana kuti cholesterol mazinga akakwirira, kudzivisa steroid iyi yose yakarayirwa. kana cholesterol iyo yakaderera zvakakwana, mushandisi anofanira kuchengetedza mararamiro akanaka. Zvokudya zvine utano zvinosanganisira shuga shoma, zvikafu zvine mafuta asina kuwandisa, uye zvakawanda zve omega mafuta acids zvichaita ruramisiro.
Kusiyana nedzimwe mhando dze steroids, Masteron propionate haina hepatotoxic anabolic androgenic. Saka hazvikuvadzi kana kuita kuti chiropa chikuvadze.
Chirwere che testosterone chinonyanyisa chinotarisirwa kuvashandi ve Masteron propionate. Itero steroid inoderedza kushandiswa kwe testosterone chaiyo. Kana munhu asingashandisi kurapwa, acharamba akadzika pasi che testosterone. Kunze kwekusava noutano hwakanaka, izvi zvinokonzera dzimwe zviratidzo.
Bodybuilders nevatambi vanoshandisa Masteron munguva yekucheka maitiro. Saka vanozvidzivirira zvakawanda zve testosterone sezvazvinoshandisa basa rakakura reestrogenic. Muchiitiko ichi, maduku maduku e-100mg kusvika ku200mg ye testosterone pavhiki ichakwanika kupa testosterone inobvunzwa uye kurwisana kuderedza.
Paunenge uchienda Masteron uye mahomoni ose e-steroidal ari kubviswa mumuviri wako, chiyero chinodiwa che testosterone chaiyo chichabudiswa. Kudzoka hakuzoitiki nokukurumidza; Zvinotora mwedzi mishomanana. Kunonoka kupora kunoshevedza post Post Cycle Therapy. Inokurumidza kupera kwekugadzirwa kwe testosterone, nechepamusoro pekugadzirwa kwepakutanga. Kazhinji, chirwere chemashure chinotapudza chinoderedza nguva yekudzorera uye chinokonzera kuperevedza kwe testosterone apo sarudzo iri kugadzirisa kusvika pakukwira kwechibereko chekuberekwa kwe testosterone. Kudzoka kunowanzoitika pakufungidzira kuti Hypothalamic-Pituitary-Testicular-Axis yakanga isingakuvadzi uye mutengi akanga asina kunyora pasi testosterone mamiriro ezvinhu munguva yakapfuura.
Masteron propionate kuwanikwa
Sezvambotaurwa kare, kugadzirwa kwe Masteron propionate kwakaderedza zvikuru uye iye zvino ma laboratories pasi pevhu anozvibudisa. vanhu vazhinji vanozviti vane Syntex Masteron yepakutanga vane chigadzirwa chakakanganisa hapana kambani inobereka Masteron propionate powder kana mune imwe nzira ipi zvayo. muUnited States. mune misika yemarudzi ose, steroid iyi inoshaya. Zvisinei, inowanikwa muhuwandu hwakawanda pamusika mutema. Alpha Pharma inogadzira Mastabolin brand iyo inowanika nyore mumisika zhinji uye yakakwirira. Generic labs uye mabhii pasi pevhu seBeomex, Geneza, uye QD mabazi anopa chigadzirwa ichi muhuwandu hwakawanda. Usati watenga zvigadzirwa kubva mubhuku repasi pevhu, zvakakosha kuti uite zvimwe zvekare kutarisa usati waisa chero kuraira. mari yeiyo anabolic ikamu inofanira kuderera kudarika pasinei nemutengesi. Munguva yakapfuura, Masteron aiva mumwe wevanhu vane mari inodhura zvikuru mumusika; ikozvino, ihomwe-yakanaka.
Tenga Masteron propionate online
Kurayira Masteron propionate online ndiyo nzira iri nyore uye yakasvibiswa yekuwana nayo. Kune vazhinji vanabolic steroid iripo paIndaneti asi zvinosuruvarisa, hazvigadzirwa nenzira imwe chete. Mikana yekuuya kune imwe yenhema, yakasvibiswa kana yakaderera dosed anabolic steroid yakakwirira chaizvo. Iwe unoguma uchirasikirwa nemari yakawanda pane zvigadzirwa zvakashata. Kuti udzivise kupisa uku, cheka zvakadzama uye uwane zvakawanda pamusoro pekupa wako. Haisi mapepa ose kunze uko akakosha mari yako. Pane zviri pachena kuti vanotengesa vechokwadi paIndaneti vanotengesa maitiro Masteron, asi ruzhinji rwevatengesi vari pasi-grade bhizinesi.
Paunenge uchitenga Masteron online, unofanirwawo kufunga nezvemutemo. Somuenzaniso, muUnited States, Masteron propionate, pakati pevamwe vanabolic steroid inofungidzirwa Purogiramu 111 inodzora zvinhu. Izvi zvinoreva kutenga steroid kuburikidza neInternet kana chiso nechiso chiri kuita zvakasiyana nezvinodiwa nemutemo. Dzimwe nyika dzine mitemo yakasimba ye steroid yakafanana neUnited States apo vamwe vane mitemo yakanyanyisa. Zvisinei, nyika dzakawanda dzinovhiringidza kutenga kwekutenga uye kutengesa kwa Masteron propionate. munyaya iyi, haisi mari yakawanda yokutenga kubva kuvatsigiri veSteroid seSteroid.com avo vanowanzopa mutemo uye unhu hwevanabolic steroids.
Masteron propionate kuongorora
Chris Patel; Chris ndiye muumbi wekuumba kubva kuUnited States uyo ave achitenderera pana Masteron propionate panguva yekucheka maitiro uye izvi ndizvo zvaaifanira kutaura. "Ndaive kushandisa trenbolone acetate pamberi. Zvirwere zvakashata zvakanga zvakanyanya kwandiri; vazhinji pimples uye acne pakati pevamwe. Ndaifanira kumira muyero. Mudzidzisi wangu akandikurudzira kuti ndipe Masteron propionate muedzo. Akanga achiri kushandisa kwemakore anenge mashanu asina kunyunyuta. Kunyange zvazvo akawana zvimwe zvisingabatsiri, akandivimbisa kuti nehurongwa hwakarurama, vaitungamirirwa nyore nyore. Sezvo ini ndiri chimiro chekugadzira muviri, ndinoshandisa dhesi yepamusoro mumagetsi angu. Saka zvakanyanya kunaka kwazvo; Ndinogara ndine simba rekusimudza zvakanyanya. Ini zvino ndiri kuita zviri nani kudarika avo vaindipikisa kare. Ndakatora Masteron propionate pamwe testosterone propionate uye nandrolone decanoate. Apo pandinenge ndichigadzirisa maitiro, Masteron ndiyo yakanakisisa. Zvinondibatsira chaizvo kuti ndicheke mafuta akawanda emuviri ayo akaoma kubvisa. Pandinenge ndichikurira, ndinosanganisira Masteron propionate iyo inowedzera simba rangu uye inondibatsira kuchengetedza uremu hunoda kunyange kana uchidya zvakawanda zvecarbs. Mumuviri wangu unononoka uye ndinowedzera uremu nokukurumidza asi ndine rubatsiro rwe steroid, ndakanaka kuti ndiende. "Chris akakurudzira steroid iyi yevarume nevakadzi vadzidzisi venyama.
Juma al Majid; Juma al-Majid mutevedzeri wemuumbi uye mudzidzisi kubva kuDhailand akashandisa Masteron propionate kwemakore masere kusvika masere. "Steroid iyi inoita kuti maitiro angu ekucheka uye kubvongodza ave nyore. Ndinogara ndichizvibatanidza mumavhiki mashomanana apfuura ekugadzirira nguva yekugadzirira. Ndakakurudzira huwandu hwevadzidzi vangu kuti vashandise uye dzakawanda zvezvinyorwa ndezvakanaka. Kunyangwe ndichirikurudzira kune vashandisi vane muviri wakaderera mafuta. Iko kuwanika ndeye dambudziko rangu guru chete. Kuwana muchengeti anovimbika kunoratidzika basa rakaoma asi ikozvino ini ndinobva kune mumwe mutengesi wandinovimba naye. Ndinotarisira kuti achatengesa chigadzirwa chechokwadi kunyange munguva yemberi. "
Chii Masteron Enanthate (Drostanolone Enanthate)?
Masteron enanthate (472-61-1), inozivikanwawo seDotstanolone Enanthate inopesana na Masteron uyo maitiro ake asingazivikanwi. zvisinei, zvakajeka kuti steroid yake yakanga isiri mishonga yemishonga yepamusoro yevanhu. Matatakiti akagadzira mamwe steroid akafanana neTrenbolone Enanthate anozivikanwa zvikuru, kusiyana neStonon ane chinyorwa chakaitika. Zvichida, rimwe revhu revhu rakaibudisa uye rakariisa mumusika. Runyerekuta rine icho icho, uye laboratori pasi pevhu inozivikanwa seDharm yakabudisa Masteron enanthate yakaiisa mumusika asi hapana humwe uchapupu hunokwana hwotsigira ruzivo. Mhando yepakutanga ya Masteron, Masteron propionate yakabva kumakambani ekurapa mishonga asi Masteron enanthate inofungidzirwa kuti yakave yakabudiswa mumusika mutengesi uye pasi pevhu.
Zvinyorwa zvishoma zvishoma nezve Masteron enanthate zvinogona kuwanikwa kubva kuvanabolic steroid nyanzvi mabhuku. Zvichibva pakuziva kuti yakanga isina kuumbwa uye kuongororwa mune chero ipi zvayo inoziva mabhidhiro ebhidhiyo, hapana kliniki yemadhora emudhaka uyu inowanikwa.
Masteron enanthate is an anabolic androgenic steroid inobatana na Masteron (Drostanolone Propionate). Masteron yakagadzirwa neSinx in 1959. Parizvino, Masteron akambomiswa naizvozvo steroid inowanikwa chete mumusika.
Ichi chemishonga inotumidzwa seanabolic androgenic steroid sezvo inokonzera kushamba kwema cell. Uyewo, inokurudzira kukura kwezvinhu zvemasikati, semuenzaniso, masimba uye vhudzi kukura. Masero anovaka kuburikidza nemetabolism isanababolism apo testosterone nemamwe mahomoni evanhu anonzi Androgens.
Pakutanga, mu '70s' uye '80s, Materon yakashandiswa kune varwere vekenza yemazamu. Kurapa kwakanakisisa kwakawanikwa munguva yekupedzisira ye1980 uye inoshandiswa kushandiswa. Drostanolone inobvumirwa neDDA muUnited States; zvisinei, vanachiremba vanotya mukugadzira kwayo.
Zvirwere zvinokonzerwa naCheonon zvakaita kuti zvizivikanwe. Iko ikozvino yakanyanya kushandiswa nevarimi vemiti yekucheka vasati vambokwikwidza. Ichi chinodhaka chinoshanda zvakakwana kubva pazviri kubva pane, anrogen hormone, DHT (dihydrotestosterone) uye steroid yepabonde. Drostanolone hormone uye DHT hormone chimwe chinhu chimwe chete, kunyange zvakadaro, kumwe kuchinja kunoitwa kuD Drostanolone kudzivirira kuparara kwemagetsi pashure pokunge kwaitwa. Uyewo kuchinja kunovandudza its analiclic effects. The methyl group is added to the carbon 2 position for the results.
Kuti zvive pachena, Dihydrotestosterone inonzi horroone uyerogen uye steroid yepabonde. DHT inoshandiswa neA5a-reductase enzyme mu prostate, testes, adrenal glands, uye mvere dzemaziso kuratidzira mamiriro evanhu. Sezvo testosterone inowedzera mumitumbi yemurume, ndizvo zvakaita DHT. Zvikamu zvishanu muzana zve testosterone dzose dzakagadzirwa zvinoshandurwa kuva Dihydrotestosterone. Chinhu chakanaka DHT haishanduki ku estrogen. Zvichibva pakuziva kuti Masteron yakavakirwa paDHT, kuwedzera muDHT hakuiti kuti kuwedzerwa kweesrogen. Icho Chinyorwa Chekupedzisira kuna Dianabol yekugadzirisa muviri
Hondoni inosunga globulin-yakasangana nekodhiyo steroid inoita kuti irege kushanda. Kuvhara testosterone hakusi kwekubatsira zvikuru kana kuchienzaniswa ne testosterone yakasununguka. Masteron anobatsira kuwedzera nhamba ye testosterone yekusununguka nekuzvisunga pachayo zvakasimba kune SHBG. Inoshanda zvakanaka kana nhengo ye steroid stack kupfuura apo iri yoga.
Kubatsirwa kwemazinga epamusoro e testosterone kunosanganisira;
Wakasimba uye yakakwirira libido
Kunowedzera hupenyu hwakanaka
Mishonga yakasimba inovaka
Vashandi veDHT havaoni zvinokonzerwa nesrogenic migumisiro, somuenzaniso, mazamu asingawanzo kukura munhurume. Izvi zvinozivikanwa segynecomastia kana "murume boobs". Ichi chirwere chinonyatsozivikanwa kuti kuderedza maitiro eesrogen mumuviri. Nokuda kwechikonzero ichi, yakashanda zvakakwana kuvarwere vane kenza yemazamu. Munguva yekucheka maitiro, steroid iyi inomesa uye inopa muviri kutarisa zvakasimba. Zvisinei, zvibereko zvakanakisisa zvinowanikwa kana yakaiswa pamwe nezvimwe steroid. Kubatanidzwa kwechirwere ichi ne-aromatizing compounds se Dianabol uye testosterone inorwisa uremu hwemvura hunoenderana neestrogen kuti ipe kupedzisa kwakanaka panguva yemakwikwi.
Ichokwadi kuti steroids inobva kuDHT haishanduki kuEstrogen, kana kuti kwete kuisa aromatize, inoita kuti igare yakafanana pakati pevaki vemuviri.no esrogenic zvinowanzoitika kana munhu achishandisa Masteron Enanthate, yakafanana nezvimwe zvinokonzerwa neDHT.
Masteron Enanthate inozivikanwawo seDrostanolone Enanthate. Pakutanga, ichi chirwere chakanga chagadzirirwa uye chakatengeswa uchishandiswa zita rezita, Masterson. Nokuda kwechikonzero ichi, yakave yakakurumbira pakati pevarimi vemuviri vakashandisa mumagariro avo. Chaizvoizvo, Drostanolone Enanthate ister ester apo Drostanolone Propionate ine shoma shoma. Misiyano pakati pemhuri mbiri iyi yakafanana nekusiyana pakati Testosterone Enanthate uye Testosterone Propionate.
Iyo hafu yeupenyu hweMsterone Enanthate inowedzera kusvika mazuva manomwe kusvika gumi nekuda kweEnththate ester yakaiswa pa 17-beta-hydroxyl. Pane zvakasiyana, Masteron Propionate hafu yeupenyu huri pakati pemakore mana kusvika mashanu kubva apo Propionate ester yakagadzirirwa kune zvinodhaka.
sei anoita Masterone enanthate inoshanda?
Masteron Enanthate, zvakasiyana-siyana zve Masteron, ndeyeta yakareba. Inoshanda kwenguva yakareba saka yakashandiswa zvakanakisisa kwenguva refu yakakura urefu, zvichida pakati pevhiki gumi kusvika gumi nemaviri. Vagadziri venyama vanoda kutsvaga vasati vasangana nemakwikwi vanozobatsirwa pavanoita chikamu chechirwere ichi chemaitiro avo. Masteron Enanthate, zvakadai sokuti steroid anabolic, haina kuwedzera anabolic simba. Chaizvoizvo, pane dzimwe nguva, inoratidzika isisina simba kupfuura Testosterone, simba rakachenjera. Masteron anabolic rating uye testosterone anabolic yero 63-130 uye 100 maererano. Izvi zvinongoreva kuti painenge isina simba, Masteron ndeye 30% yakashata kudarika testosterone kana kuti inogona kunge iri 30% yakasimba pane imwe yakasimba pane iyo inobata vanabolic. asi mumwe munhu angava nemigumisiro inogutsa kubva kushandiswa kwe Masteron Enanthate, inogona kuva nemagumisiro akawandisa kana zero pane mumwe munhu. Ichi chirwere chinobereka zvakanakisisa zvingagadziriswa kana zvichisanganiswa nemhando dzakasiyana dzevanabolic steroids. Zvinogona kunge zvakakundikana patinoshandiswa tiri voga kunyanya kune vanhu vakashandisa anabolic steroids munguva yakapfuura.
Chiyero che 400mg che Masteron Enanthate vhiki imwe neimwe yakwaneka kutanga, uye inogonawo kuchengetwa. Kunyange zvazvo, muyero wacho unonyanya kuvhiringidza pane izvo zvinoshandiswa nemunhu anoshandiswa kubudirira mushure mekufamba kwenguva kana kuti chii chaanoda kuwana kubva pamishonga pachayo. sezvakambotaurwa kare, nhamba yekutanga inowanzoita 400mg kwevhiki, zvisinei, vadzidzisi vemuviri vanoshandisa iyo musati mitsara inosarudza kudya 200mg vhiki nevhiki pamwe chete nemamwe makemikari. Vashandi vane huwandu hwemazana ehumuviri, miviri yavo ine ruzivo rwakakosha ruzivo apo pavanoshandisa 200mg vhiki nevhiki.
Chiyero che 600mg kana kupfuura 800mg vhiki nevhiki hazvirevi kuti zvinobatsira vazhinji vanofunga. Vadziviriri vanoda kufarira simba uye kukura zvinotungamirira masero emu Masteron Enanthate, asi zvingaguma zvisingakoshi. Tichifunga nezvekugona uye mutengo wechirwere ichi, kuedza hakuna maturo. Uyezve, Masteron inyanzvi yekuvandudza uye haisimudzi kusimba uye simba.
Kutora Masteron Enanthate nedzimwe vana anabolic steroid inokurudzirwa. Mamwe mapuranga anofanira kunge akafanana naWatonon uye anoshandiswa nokuda kwechinangwa chimwe chete kana kuti chinangwa chinangwa chekuwana zvinangwa zvakafanana. Kazhinji, Testosterone inofanira kushandiswa pamwe nevanabolic steroids. Kubatanidzwa kweTesttosterone Enanthate uye Masteron Enanthate isarudzo yakanakisisa. Kufunga kuva, chikwata cheEnththate based steroids chinongoita nguva nekujekesa zviri nyore zvikuru uye zviri nyore. Kana chikamu chechitatu ichidikanwa, chirongwa chinonzi anabolic steroid chinogona kuuya musina simba chero bedzi chichifanana nenzira yezvakagadziriswa. Saizvozvowo, chechitatu injectable yaizoita, somuenzaniso, Trenbolone Enanthate. Mutsara weTestosterone, Trenbolone uye Drostanolone Enanthate inozivikanwa sechinhu chinonyanya kukonzera vavengi vanotanga kupikisana uye miviri yehupenyu. Izvi zvakasiyana-siyana zveEthanate zviri pachena zvakasarudzwa nekuda kwekukodzera kwavo kwakakwana. Uyewo, Trenbolone inovandudza maitiro anobatsira a Masteron pamuviri. Mukuwedzera, Masteron naTrenbolone havatendeuki kuEstrogen pavanoshandiswa. Saka muviri womunhu unogona, saka, kushanduka kuva chimwe chinhu chakanaka uye kukoshesa muyero munguva yakafanira. Zvinokurudzirwa kuti usashandise Masteron Enanthate mune simba uye kubvongodza. Pane kudaro, zvisingadhuri kushandisa imwe aromatase inhibitor zvinodhaka.
Vashandi vanoonda vanobatsirwa zvikuru kubva kuDhanion Enanthate muyero panguva yekucheka maitiro. Kazhinji, varimi vemuviri vanoshandisa ichi chirwere pachikamu chekupedzisira chekugadzirira makwikwi; mushure mokunge varasikirwa nemafuta akawanda. Chirwere ichi chinobatsira kuti ndibvise mafuta akasara akaoma. Migumisiro mushure mokurapa haisi kunyatsooneka kune vanhu vasina kuonda. Saizvozvowo, ichi chirwere chakakosha kune vasiri muviri vanovaka muviri.
Nhamba huru yevanhu vanoshandisa steroid iyi nekuda kwezvakanaka zvayo zvemashoko. Zvinoshamisa, zvinowedzerawo simba rega. Apo vanhu vari kuedza kudonha panguva dzakatenderera, vanopedzisira varasikirwa nesimba. Masteron Enanthate inotora basa rinokosha pakudzivisa izvi zvichirasikirwa nokusimudzira musimba kutsungirira, simba rose uye nguva yekudzorera.
Masteron Enanthate yakaoma kuwana uye kutarisa kana ichienzaniswa na Masteron Propionate. Nokuda kwechikonzero ichi, vashandisi veSteroid havasati vashandisa ichi chemishonga, varimi vemuviri vanobatanidzwa.
Masteron enanthate maitiro
Masteron enanthate maitiro anofanirwa kuisa steroid yekunze, kwete chaizvo kuti Masteron akasiyana. Somuenzaniso, inobatanidza zvakanaka ne testosterone. Iwe unogona kushandisa chero rudzi rwe testosterone chero bedzi runopa huwandu hunodiwa hwehomoni yepabonde.
Kubatanidzwa kwe testosterone mumitambo yose kunotarisirwa. Masteron inoshungurudza maitiro e testosterone chaiwo saka izvo zvinodiwa nemuviri zvinoderedzwa. Nokuda kwechikonzero ichi, kunze kwe testosterone inofanira kupiwa kuitira kuti shandiso yevashandi ishande zvakanaka. Vashandi vasina hanya nekubatanidzwa kwe testosterone mucheka vakave nemigumisiro yekuderera kwe testosterone muviri. Zvisinei, vanhu vakazvigadzirirwa pasi pasi testosterone mamiriro ezvinhu vangasabatsire zvakawanda kubva kunze kwekuwedzera kwehomoni iyi. Majojini mashoma anogadziridzwa paanoshandisa Masteron enanthate panguva dzakatenderera. Ichi steroid ine nguva yakareba yehupenyu saka inoramba iri muhurongwa kwenguva yakareba.
A Masteron enanthate inotanga kufamba inogona kusanganisira dhigirii revhiki ye 400mg Masteron enanthate, uye 300mg ku 500mg testosterone enanthate. Nhamba ye testosterone inoshandiswa inobva pane vanhu vanofarira chero bedzi iyo inorara pakati pehurukuro inopiwa. An aromatase inhibitor haisi kudiwa mumhepo ino sezvo Masteron pachake ari inhibitor.
Kutora Masteron enanthate nemakemikari ane simba anogadzirisa mumutambo kunoda kuiswa kwesimba rakanyanya aromatize inhibitor, somuenzaniso, Arimidex, Letrozole naAromasin. gynecomatia inowanzova pakati pevashandisi vasingatauri inhibitor mumutsetse nemazhinji aromatizing steroids.
Masterone Enanthate madhara
Estrogenic madhara anowanikwa apo vanhu vanoshandisa steroids. Somuenzaniso, kuchengetedza mvura kana gynecomastia, bloating, high blood pressure uye acne. Zvisinei, Masteron Enanthate iri nani zvikuru sezvo inosanganisira anti-estrogenic effects. Zvinoreva, vanhu vanoshandisa steroid havakwanisi kushandisa ant-estrogens. Paunenge uchishandisa mamwe mapurisa ari pedyo na Masteron Enanthate, iwe uchada kushandisa anti-estrogen.
Vakuru veMasterson Inanthate madhara ane chokuita ne androgens. Androgens inowedzera masikati zviito zvinokonzerwa nemasikine, vhudzi kurasikirwa nevarume vane mhanza muenzaniso uye kukura zvakanyanya kwebvudzi pamakumbo kumashure, chifuva uye ruoko. Kunyange, izvi zvinokonzera hazvirevi zvakanyanya uye zvinokanganisa varume vane nhoroondo yemamiriro aya.
Vakadzi vanoshandisa Masteron Enanthate vanogona kukudziridza humwe unhu huripo pahutachiona. Kunyangwe, zviito izvi zvinofanira kupera pavanomira kushandisa chiremba asi dzimwe nguva kuchinja kunogona kusakanganiswa. Kuchinja uku kunoshandiswa kune virilization uye inoratidzira izwi rakadzama, clitoris kuwedzera nekuveura bvudzi pamuviri wechikadzi. Kubudirira kwemugumo uyu kunonyanya kunamatira ku genetics saka kunowanikwa pakati pevanhu. Vakadzi vanorayirwa kuti vashandise Drostanolone Propionate pane Masteron Enanthate sezvo ichichenesa muviri munguva shoma.
Drostanolone Enanthate inokanganisa cholesterol maitiro asina kunaka. Iyi steroid inowedzera mazinga eLDL ichiri kuwedzera mazinga eHDL muropa. Izvo zvinokonzerwa neHDL zvakashata kana zvichienzaniswa nemigumisiro yeLDL iyo yakawanda inogona kunge isinganyanyi kukosha. Kuti ishandise migumisiro yayo, vashandi vanofanira kugara vachiita mabasa epfungwa sezvinoshambira, kushanda, kutamba uye mabhasikoro. High blood pressure zvakare inogona kunge iri dambudziko kumunhu. Vanhu vane high cholesterol mazinga vari nani zviri nani kunze kweiyi steroid.
Masteron Enanthate vashandisi vevarume vachada testosterone yakawandisa sezvo steroid inoshungurudza zvakakonzerwa nehuputi hwe testosterone chaiyo. Izvi zvinogadziriswa. Vashandisi vanopinda testosterone replacement therapy kuti varwise dambudziko. Inosanganisira kutora chirwere che 100mg che testosterone. Kana munhu anoshandisa maitiro e Masteron Enanthate ye testosterone chaiyo inofanira kubudiswa kune maitiro akaenzana mumwedzi inoverengeka. Zvinokurudzirwawo kuti uwane Post Cycle Therapy (PCT) iyo inobatsira pakugadzirisa chirongwa ichi uye inovandudza kugadzirwa kwe testosterone chaiyo. Kudzorerwa kwemaitiro akaenzana e testosterone kunotora nguva yakareba kune vanhu vakanyoresa nhoroondo yemamiriro e testosterone kana kuti maonero ezasi e testosterone. Zvichiri nani, vanhu ava vanorayirwa kuti vasaita steroid muyero zvachose.
Kusiyana nedzimwe vana anabolic steroids, Masteron enanthate haina kukonzera kukuvadza kuchiropa kana kupindira nekuita kwayo kushanda. Izvi ndezvekuti hazvina kubva kune hepatotoxic anabolic androgenic.
Tenga Masteron Enanthate online
Mumakore achangopfuura, kubudiswa kwaMateon Enanthate kwakaderera. Sezvakambotaurwa, ichi chinodhaka chinowanikwa chete mumusika. Izvo zvakanyanya kudhura kupfuura Masteron Propionate.
Usati watenga Masteron Enanthate kuburikidza neInternet, vatengi vanofanira kutora chekuita chekare kuti varege kupararira. Kana usina kungwarira, unogona kuguma kutenga fomu fake ye steroid kana kunyange mutezo unokuvadza pamwe chete.
MuUnited States, Masteron Ethanate haisi mvumo yekutengesa saka kuitenga iyo chiso nechiso kana paIndaneti haisi pamutemo zvakare. Icho chinhu chinodzora, Purogiramu 111, saka inogona kungotengwa chete nekubhadhara. Zvinosuruvarisa, vanachimishonga havasati vava kutengesa iyo zvichiita kuti zvibvirire kutenga nomutemo.
Masteron enanthate mhinduro
Allan Walker; Allan Walker ndiye mutumbi wemuviri uye mudzidzisi wekurovedza muviri muChicago. Izvi ndizvo zvaaifanira kutaura nezve steroid. "Masteron Enanthate iye zvino ini wandinoda kudarika steroid. Ndakaedza Tren.a uye e munguva yakapfuura asi ini ndinopedzisira ndava nemaputi-handidi kuda kuchinja uku kwakaipa mumuviri wangu. Nokuti ikozvino, pose apo ini ndinoda kugura, ndinongoshandisa Masteron. Muyero wangu unosanganisira;
Edzai Test 200mgs / EOD
Winny 50mgs / zuva
Ndakanyanya kuwedzera uremu muhafu yekutanga yekugadzira kwangu; kubva ku190lbs kusvika ku 220 lbs. Kwandiri, izvozvo zvakanga zvisina kunyanya uye zvakanga zviri izvo zvandaida kuti ndisvibise mitsipa yangu. Ndakatanga kushandisa Masteron muchikamu chechipiri chechizhinji changu. Mushure memavhiki matatu kana kupfuura ndakaona kuti ndave kurashikirwa nemafuta emuviri pasina rubatsiro rwekudya kuchinja kana cardio. Ndakadurura mafuta akawanda zvakapfuura nguva. Saka ndakafunga neni, sei usina kudya carbs uye tsvimbo dzinowedzera uremu uye ona izvo zvinoitika. Ndakashamisika, handina kuwedzera kuyerwa, uye handina kurasikirwa. Ndakanga ndichitsvaga anenge 500g carbs zuva nezuva. Mumuviri wangu unonyatsotarisana necarbs, chaizvoizvo, haisi ye Masteron, ndingadai ndakaisa mafuta nechinhu chipi nechipi chinopfuura mazana maviri gm pazuva. Ndinogara ndakanyarara, ropa rangu rinowanzoita uye ndinonakidzwa kudzidziswa. Nenguva yakajeka, Masteron akabatsira mukurasikirwa kukuru, zvikamu zvakakura zvekudzidzisa, uye kuoma kwemasuru. iyo yerutivi yechipfuva yandakaona ndeimwe maputi asi haasi kunyanya kufananidzwa nepo ini ndinoshandisa Tren. a. Kazhinji, vanhu vakawanda vangashandisa Mast prop asi Masteron Enanthate bulking inowedzerawo.
Petro; Petro, muumbi wekuvaka, anobva kuParis. "Zvirongwa zvangu maiva 50mgMasteron Propionate zuva nezuva, 200mg Mast Enanthate vhiki nevhiki uye 100mg testosterone enanthate vhiki nevhiki panguva yekucheka kwangu. Ndakagamuchira zvishoma zvishoma mumavhiki mashomanana ekutanga pandinovaka mamwe mutsvuku asi ini ndakazodurura pane imwe nzvimbo pandinenge ndichifamba. Ndiine chikwata ichi, ndinozadza chisingachinji. Chinhu chakanakisisa na Masteron enanthate ndechokuti ini ndinongoda kuidya kamwechete pavhiki. Izvo zvaita kuti ndiite ruramisiro kusvika pakucheka kunofunganya. Kunyunyisa, zvisinei, ndinofunga kuti haisi iyo steroid yakanakisisa asi ndinoda nzira iyo inosimudzira simba rangu. Ndanga ndichiri kushandisa shandi iyi pamatanho ekupedzisira ekukwikwidzana kugadzirira kuparadza mafuta anoramba aripo kuitira kuti ndirege kutarisa zvakakura. Ndine akangwara zvakakwana kuti ndibatanidze kudya kwecarb-uye ini ndinodzidzisa zvakaoma.
Masteron propionate zvakasiyana-siyana ndiyo yakagadzirwa na Masteron format yakagamuchirwa kushandiswa kwechiremba. Izvo zvinoitika kuti ndiyo yakawanda uye inoshandiswa zvakanyanya nevanabolic steroid vashandisi. Kusiyana kweananthate kwakanga kusingagadziri nekugadzirwa kwezvokurapa asi saka pasi pevhu kana kuti pane zvakashata zvisiri pamutemo laboratory product. Masteron propionate inoratidza hafu yehupenyu hwemazuva anenge 2.5 apo Masteron Enanthate inopa hafu yeupenyu hwemazuva anenge gumi.
Chiyero che Masteron Propionate chinofanira kushandiswa zuva rega roga kuti chigadzikane nehomoni; kunyanya pakati pe50 kusvika ku150mg injections. Kune rumwe rutivi, Masteron Enanthate inofanira kuitwa kamwechete kana kaviri pavhiki. Somuenzaniso, kana muyero uri 400mg, chirongwa che 200mg chinofanira kugoverwa musi weMuvhuro uye zvakasara musi weChishanu. Kaviri pavhiki zvinonyanya kunaka kuti urambe uine ropa rema plasma.
Misiyano muyero inokonzerwa nekuti Masteron Propionate inokurumidza kukurumidza kupfuura Enanthate asi inojekesa muviri nokukurumidza. Pane zvakasiyana, Masteron Enanthate inoshanda zvishoma nezvishoma asi inogara kwenguva yakareba mumuviri. Vose vaviri vari vatendi variko vanozivikanwa sevasina simba saka vanofanirwa kutarisirwa pamwe chete nemamwe makambani akafanana.
Hapana misiyano yakakura pakati pemakemikari ekutengesa nemamwe maviri Masteron vari vari. Iko, zvisinei, zvakakosha kunzwisisa kuti steroid yaunosarudza kuisa mumutsetse inotarisa unhu hwayo. Semuenzaniso, kusanganiswa kwe Masteron enanthate uye testosterone propionate kuchapa mhinduro dzakanaka pakuguma kwemhepo. Chinhu chinokosha chekutarisa kana kuvhara kwekusarudza ndiko kusarudza zvinokwana zvakafanana naShe Masteron uye izvo zvinogona kupa mhedziso yakafanana.
Saizvozvowo, vamwe vanogadzira muviri vanogona kusarudza kuwirirana zvose Masteron propionate na Masteron enanthate, iyo isingakuvadzi. Vashandi vanofanira kuve nechokwadi chokuti vanosanganisira aromatize inhibitor kana vakagadzika imwe ye Masteron nevakawanda zvinogadzirisa zvinomera.
Testosterone inofanira kuiswa mune imwe pfumo re Masteron kuti iwane pasi ye testosterone kuverengeka mumuviri wakaunzwa nekuiswa kwa Masteron mumuviri.
Masteron inosanganisira an androgenic / anabolic chiyero che 25; 62 apo testosterone inoshandisa 100; 100 ichifananidza steroid maviri. Izvi, zvisinei, hazvifaniri kureva kuti masteron haina simba. Kana yakasungwa nemamwe makemikari, inowedzera, asi kana ishandiswa yoga inenge isinganyanyi kubudirira.
Masteron propionate, kuva ester shoma, vashandisi vanozvibatanidza pamwe nemamwe madheta ester (s) akadai testosterone propionate, nandrolone phenylpropionate, uye trenbolone acetate. Stacking inobvumira esters kuti arambe akafanana pakati pavo. kune rumwe rutivi, sezvo Masteron enanthate iri nguva yakareba, yakaiswa pamwe nedzimwe steroid yakafanana seyo trenbolone enanthate, testosterone cypionate kana testosterone enanthate uye nandrolone decanoate.
Masteron propionate kuderedza vs Masteron propionate kudonha
Zvose zvakasiyana-siyana zve Masteron zvine zvakawanda panguva yekucheka maitiro. Hapana misiyano yakakura mune zvavanogona kupa. Vamwe vanhu vangasarudza kushandisa Masteron propionate kubva panguva yekudzikinura nguva shoma saka migumisiro inowanikwa nekushandiswa kwayo inonyangarika nokukurumidza zvakare. Masteron enanthate, kune rumwe rutivi, ane nguva refu yekudzikinura.
Izvo zvose Masteron propionate uye enanthate zvinoshandiswa zviri nani pakucheka kusvika kumugumo wemakwikwi ekugadzirira nguva. Panguva iyi, munhu anoshandisa zvakasimba zvakakwana uye naizvozvo migumisiro ye steroid inova yakajeka. Kazhinji, Masteron anobvisa mafuta akaoma musoro kuti ape muviri wakaoma. Zvakakosha kudira mafuta emuviri kusvika pasi pe10% usati washandisa Masteron kuti ucheke.
Zvose Mastrone propionate uye Masteron enanthate haisi yepamusoro steroid yekubvongodza. Ivo, zvisinei, vanosimudzira simba uye kuvaka mishonga yakaonda. Zvisinei, kana chinangwa chemushandisi ichi kuwedzera masimba mumasumbu, saka kune mamwe steroid kunze uko zvakakodzera zvakakodzera.
Masteron propionate uye enanthate inogona kuiswa muurongwa hwekudzungira kugadzirisa mafungu emuviri kubvisa nguva yekuputika. Parizvino, mushumiri haadi kuwedzera kuwedzera kwehutano. Zvisinei, izvi hazvifaniri kuva chikonzero chekubatanidza, masteron muchirongwa chekuderedza. Kazhinji, chikonzero chikuru chinoita kuti masteron ijowe mubhuku rinoputika ndeyokuwedzera simba uye kubatsira mutengi kuchengeta huremu hwemuviri hunodiwa kunyange kana paine kudya kwakakura kwecarb.
Masteron enanthate madhara vs Masteron propionate madhara
Masteron propionate yakajairika pakati pevashandi sezvo ichienzaniswa na Masteron propionate. Migumisiro, zvisinei, ine zvishoma zvishoma. Vose varume nemadzimai vanogona kushandisa Masteron propionate mukucheka uye kubvongodza. Iyo migumisiro yechirwere, munyaya iyi, inodzora ne chirongwa chakanaka uye maitiro akanaka. Kune rumwe rutivi, vakadzi vanoodzwa mwoyo kubva kushandisa Masteron enanthate sezvo ine nguva refu yeupenyu uye inotora nguva yakawanda yekudisa hurongwa. Vakadzi vanoshandisa iyo kunyanya mukurapa kwepamusoro vanogona kuve nekusakanganisika kwehupenyu hwemigumisiro.
Masteron propionate inoshanda zvikuru kwazvo apo Masteron enanthate inononoka. An ester yakabatanidzwa na Masteron enanthate ichiita kuti iwedzere asi inobudisa mahomoni kwenguva refu. Ichi ndicho chikonzero chikuru chinoita kuti propionate injove zuva rega rega kana kuvhara ropa kuchijowa kaviri kana kamwe kamwe pavhiki.
Vose vaviri vari vatendi variko havatendeuki kune estrogen. Zvinodzivisawo kutendeuka kwe testosterone kune isrogen. Nhamba yakanaka uye yakasununguka ye testosterone yakasununguka inochengetedzwa.
Migumisiro yekushandisa kana Masteron propionate kana Masteron enanthate inowanikwa mukati menguva pfupi yekushandiswa kunyanya kune vanyanzvi uye vadzidzisi vane ruzivo uye vanogadzira muviri. Inowedzera simba rayo uye inovabatsira kuti vashandise hutendere hwakasimba apo vachiri kuchengeta mutoro unodiwa.
Masteron enanthate vs kupikisa mazano
Vazhinji vashandisi veSteroid vangave vasina kutora Masteron zvikuru kana vachienzaniswa nedzimwe steroid sezvo vakawanda vari kunetseka nekuwedzera mazai akaiswa. Zvisinei, kana vakanzwisisa zvinorehwa nezvakabhadhara Masteron inopa, kunze kwekukwikwidza, ipapo steroid ino inonyanya kukwirira.
Masteron Propionate inowanzoshamisa pakati pevashandisi ichienzanisa Masteron Enanthate. Ichi ndechokuti inotungamirirwa nyore nyore uye purogiramu yakanakisisa ye steroid inowanikwa nyore nyore mumusika. Uyewo, vashandi vechikadzi vangasarudza kushandisa Masteron Propionate sezvo inosasa muviri munguva pfupi.
Masteron propionate kutengeswa vs Masteron enanthate kutengeswa
Masteron propionate ndiyo fomu yekutanga ya Masteron. Nokuda kwechikonzero ichi, inonyatsozivikanwa nevashandisi vakawanda sezvo ichienzaniswa na Masteron enanthate. Saizvozvowo, steroid iyi inobvumirwa muUnited States asi inofanirwa kurongerwa. Kune rumwe rutivi, mavambo a Masteron enanthate haazivikanwi uye haatenderwi munyika dzakawanda. Zvisinei, Hazvisi zvakaoma kuwana Masteron enanthate / propionate yakagadzirwa mumusika mutengo.
Kutenga Masteron propionate kuri nyore kwazvo kupfuura kutenga kusiyana kweananthate. Zvose izvi zvose zvinowanikwa mumusika wayo wakazara mune zvakawanda. Mhedzisiro yakakosha iri kuwana steroid yakachena uye yepakutanga. Iwe unogona kutarisana a Masteron enanthate / propionate kupa uyo anotengesa soniid yakasvibiswa kana kuti yakaipa. Mune dzimwe nyika zvakare, kutenga Masteron chiso nechiso kana chiso kana paIndaneti haisi pamutemo saka vashandisi vanofanira kunge vakangwarira pavanenge vachitenga steroid.